Ogaden News Agency (ONA) – Bayaan iyo Goaamadii Shirweynaha 21aad ee Jaaliyadaha Ogadenya
Bayaan iyo Goaamadii Shirweynaha 21aad ee Jaaliyadaha Ogadenya
Posted by ONA Admin	/ August 29, 2016
Kadib markii si rasmi ah loosoo gabagabeeyey shirweynihii 21aad ee jaaliyadaha Ogadenya oo ka socday magaalada Minneapolis,gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka intii u dhaxaysay 26-28 August 2016 ayaa waxa alaga soo saaray bayaan iyo goaamada hoos ku qoran.
Goaamadii Shirweynaha 21aad ee Jaaliyadaha Ogadenya
Shirweynaha 21aad ee Jaaliyadaha Ogadenya oo lagu qabtay Magaalada Minneapolis,gobolka Minnesota ee wadanka Maraykanka intii u dhaxaysay 26-28 August 2016 ayaa waxaa laga soo saaray goaamo dhaxalgal ah,baaqyo iyo cambaarayn culus.
Shirweynaha oo ay kasoo qayb galeen madax sare oo kamid ah masuuliyiinta JWXO iyo wufuud ka kala socotay qaaradaha aduunka oo matalaysan jaaliyadaha Ogadenya ee ka howl gala daafaha caalamka ayaa lagaga tashanayay xaalada Ogadenya ee Siyaasad,dhaqaale,nolol iyo xaaladaha cusub ee kusoo kordhay geeska afrika.
Waxaa sidoo kale shirweynaha kasoo qayb galay oo marti sharaf ku ahaa masuuliyiin ka socotay wadanka Maraykanka iyo madax sarsare oo wakiilo ka ahaa isbahaysiga PAFD ururadiisa kala duwan kuwaas oo madasha shirka kasoo jeediyey khudbado kulkulul oo ay ku nuuxnuuxsadeen in lasoo gaadhay xiligii loo midoobi lahaa sidii la isaga tuuri lahaa heeryada gumaysiga Itoobiya loogana xoroobi lahaa taliska dhiig-yacabka ah.
Intii uu socday shirwenahan jaaliyadaha Ogadenya ee sanadkan 2016 waxaa hoosta laga xariiqay in dhibaatooyinkii iyo dibindaabyadii taliska Addis Ababa ee ka amar qaata kooxda tirada yar ee TPLF uu weli sii socdo loona gaysto shacbiga Ogadenya ee aan waxba galabsanin dhibaatooyinka ay kamidka yihiin: Dilka,Xidhayga,Dhaca,Kufsiga iyo cunaqabatayn arxan darro ah oo laga go,doomiyey caalamka intiisii kale siiba dowladaha dariska la ah Ogadenya,dhibaatadaasna aan rajo laga qabin inay dhamaato inta uu jiro gumaysiga madoow ee Abasiniya ee xooga ku haysta Ogadenya.
Shirweynuhu wuxuuu cambaarayn kulul dusha kaga tuurayaa xukumada TPLF ee macangaga ah oo xasuuq ka wada gobolada qowmiyadaha kala ah: Soomaalida Ogaadeenya, Oromiya, Axmaara, Gambella, Sidaamo, Binishingul, Canfar, iyo qaar kale.
Sidoo kale Shirweynuhu wuxuu cambaareeyey cid kasta oo gumaysiga gacan kusiisa dhibaataynta shucuubta rayidka ah ee ku hoos dulman taliskiisa.
Shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa dhamaan shacuubta ku hoos dulman Xukumada ay hogaamiso TPLF inay u midoobaan sidii ay isaga qaadi lahaayeen dulmiga xukuumada dhiigyacabka ah . gaar ahaan waxay ugu baaqeen shacbiga Ogaadeenya inay u midoobaan danahooda iyo sidii ay gacmaha isu qabsan lahaayeen. Waxa Itoobiya loo yaqaan waxay galaysaa xilli kala guura oo qowmiyadii aan midaysnayn ay halis u tahay inay mar kale gumaysi cusub u gacan gasho.
Gebagebadii shirweynaha ayaa waxaa loogu baaqayaa dawladaha aduunka, Qaramada midoobay, Ururada Xuquuqal Iinsaanka, iyo bulshdaa Caalamku in la soofara galiyo xasuuqa ay xukumada Tigreegu ka wado Gobolada aynu kor ku soo xusnay
Shirwaynaha 21aad ee Jaaliyadaha Ogaadeenya,